Ny anton'ny ady Ady
Ny fanontaniana mangatsiaka amin'ny ady mangatsiaka
Mpahay tantara momba ny Cold War
Ny tantaran'ny ady mangatsiaka
Ady fahatsiarovana ny Cold War - hetsika 1945 mankany 1950
Ady fahatsiarovana ny Cold War - hetsika 1950 mankany 1959
Ady fahatsiarovana ny Cold War - hetsika 1960-1979
Ady fahatsiarovana ny Cold War - hetsika 1980 mankany 1991
Ady fahatsiarovana ny Cold War - vondrona
Ady fahatsiarovana ny Cold War - mpitarika
Ady fahatsiarovana ny Cold War - teny sy hevitra (I)
Ady fahatsiarovana ny Cold War - teny sy hevitra (II)
Mangatsiaka ny fahatsiarovana ny Cold War
Sarimihetsika amin'ny Solda sy fahitalavitra
Ady mangatsiaka #1
Ady mangatsiaka #2
Ady mangatsiaka #3
Ady mangatsiaka #4
Ady mangatsiaka #5
Ady mangatsiaka #6
Ady mangatsiaka #7
Ady mangatsiaka #8
Ady mangatsiaka no nanontany
Ady mangatsiaka no nindramina
Ny lohahevitra amin'ny ady mangatsiaka
Ady mangatsiaka hoe iza
Ny adin'ny ady mangatsiaka - ady hevitra
Ny adin'ny ady mangatsiaka - ady
Ny teny ady atao amin'ny Cold War - vondrona
Ny adin'ny ady mangatsiaka - olona
Ny adin'ny ady mangatsiaka - toerana
Ny tenin'ny ady mangatsiaka
Ny ady mangatsiaka dia fe-potoana lava sy fifanenjanana iraisam-pirenena teo amin'ny 1945 sy 1991. Nomarihin'ny fifanarahana miezinezina i Etazonia, ny Sovietika ary ireo mpiara-dia aminy.
Ilay andiany hoe 'ady mangatsiaka' dia nosoratan'i George Orwell mpanoratra, izay tamin'ny volana oktobra 1945 dia nanambara ny vanim-potoana iray hoe "stabilité mahatsiravina" izay ny firenena matanjaka na ny alalàn'ny firaisankina, samy mahay mamotika ny hafa, mandà ny hifanerasera na hifampiraharaha.
Ny faminaniana mampahory an'i Orwell dia nanomboka niseho tao 1945. Raha nafahana tamin'ny herisetra Nazi i Eropa, dia ny Tafiky ny Sovietika Sovietika tany atsinanana sy ny Amerikanina ary Anglisy tany andrefana. Nandritra ny fihaonambe hilazana ny ho avin'ny ady tany Eoropa, nipoitra ny fifanolanana teo anelanelan'ny mpitondra Sovietika Joseph Stalin sy ny Amerikanina sy anglisy.
Tamin'ny tapaky ny 1945, ny fanantenan'ny fiaraha-miasa taorian'ny ady teo amin'ny Sovietika sy ireo firenena tandrefana dia rava. Tany amin'ny faritra atsinanan'i Eoropa, nanosika ireo antoko sosialista ho fahefana ny agon'ny sovietika, nanosika ny mpanao politika anglisy Winston Churchill mampitandrina momba nySady vy”Nidina tany Eropa. Etazonia dia namaly tamin'ny fampiharana ny Drafitra Marshall, fonosana fanampiana fanampiana 13 lavitrisa efa-taona izay hamerenana ny governemanta sy ny toekarena eropeana. Tamin'ny faramparan'ny 1940, ny fidiran'ny sovietika sy ny fanampiana tandrefana dia nanasaraka an'i Eropa ho blocs roa.
Sarintany mampiseho ny fizarazana an'i Eropa nandritra ny Ady mangatsiaka
Tao amin'ny ivon-toerana tamin'ity fizarana ity dia Alemana taorian'ny ady, nifikitra tamin'ny halavola roa izy ary Berlin renivohitra no nofehezin'ny hery efatra samihafa.
Ao amin'ny 1948, ny Sovietika sy ny Alemana Atsinanana dia manandrana mangetaheta ny fahefana tandrefana any Berlin natopatopan'ny fiaramanidina lehibe indrindra teo amin'ny tantara. Ao amin'ny 1961 ny governemanta an'ny Alemana Atsinanana, miatrika a fitrandrahana masin'ny fireneny, nohidiana ny sisin-taniny ary nanangana sakana anatiny ao amin'ny tanàna mizara an'i Berlin. The Berlin Wall, araka ny nahafantarana azy, dia nanjary tandindon'ny faharetan'ny Ady mangatsiaka.
Ny fihenan'ny ady mangatsiaka koa dia miparitaka any an-dàlan'ny sisintanin'i Eropa. Tamin'ny Oktobra 1949, ny Revolisiona Sinoa dia nifarana tamin'ny fandresena an'i Mao Zedong sy ny Antoko Kaominista Shinoa. Tonga haingana ny indostrian'i Chine ary lasa hery niokleary, raha ny fandrahonana kaominista no nanetsika ny hangatsiaka ny Cold War tany Azia. Ao amin'ny 1962, ny fitadiavana an Balafomanga sovietika ao amin'ny firenena nosy Cuba nanosika an'i Etazonia sy ny Sovietika ho amin'ny ady nokleary.
Ireo zava-nitranga ireo dia niteraka haavo, ahiahy, paranoia ary tsiambaratelo. Ireo masoivoho toy ny Central Intelligence Agency (CIA) sy Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB) nampitombo azy ireo fiaraha-mientana manerana izao tontolo izao, nanangona fampahalalana momba ny fanjakana sy ny fitondrana. Niditra an-tsehatra ihany koa izy ireo teo amin'ny politikan'ny firenen-kafa, namporisika sy nanolotra hetsika tany ambanin'ny tany, coup d'etats ary ady an'olona.
Ny olona tsotra dia niaina ny Ady mangatsiaka tamin'ny fotoana tena izy, tamin'ny alàlan'ny iray amin'ireo mafana fo indrindra fampielezan-kevitra fampielezan-kevitra teo amin'ny tantaran'ny olombelona Ny lanjan'ny Ady mangatsiaka sy ny paranoia niokleary dia nanerana ny lafiny rehetra amin'ny kolontsaina malaza, anisan'izany sarimihetsika, fahitalavitra ary mozika.
Ny tranokalan'i Alpha History Cold War dia loharanom-pahalalàna boky momba ny kalitao feno indrindra amin'ny fandalinana ny fifanolanana ara-politika sy ny miaramila eo anelanelan'ny 1945 sy 1991. Ahitana loharanom-pahalalana fototra voalohany sy faharoa ao anatiny, izay misy ny antsipirihany famintinana lohahevitra, antontan-taratasy, Tantara amin'ny, glossaries ary tantaram-piainana. Ireo mpianatra mazoto dia mahita fampahalalana momba ny Ady mangatsiaka historiography ary mpahay tantara. Ny mpianatra dia afaka manandrana ihany koa ny fahalalany ary mampatsiahy azy ireo amin'ny hetsika an-tserasera marobe, anisan'izany Quizzes, crosswords ary wordsearches. Ny loharanom-bokin'ny Kilonga, ny votoatiny rehetra ao amin'ny History History dia nosoratan'ireo mpampianatra, mpanoratra ary mpahay tantara za-draharaha.
Sarimihetsika & fahitalavitra
Ity tranonkala Cold War ity dia misy lahatsoratra, loharano ary fomba fijery momba ny hetsika manerantany sy fifanolanana eo amin'ny 1945 sy 1991. Namboarin'ny Alpha History ity tranonkala ity ary misy ny teny 308,862 amin'ny peo 405. Raha mila fanazavana fanampiny, tsidiho ny fitsidihanay FAQ pejy or Fepetra fampiasana.